8-da codsi ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay iPhone | Wararka IPhone
Nooc kasta oo cusub oo macruufka ah ayaa na siiya wax cusub fondos de pantalla, qaar iyaga ka mid ah oo u gaar ah moodooyinka cusub ee shirkaddu suuqa ka soo saarto sannad kasta. Waxaa ka mid ah waraaqaha sawirada ee aan ka heli karno firfircoon, go'an oo nool (waxay maalgelisaa markaad riixayso dhaqdhaqaaqa lacag bixinta shaashadda). Noocyada noocan oo kale ah waxay muujinayaan oo keliya dhaqdhaqaaqa shaashadda qufulka aaladaha iswaafaqsan.
Kuwo badan ayaa ah kuwa adeegsada ee ku raaxeysanaya raadinta sawir-qaadashada si ay shakhsi uga dhigaan iPhone-kooda, ha noqoto kooxda kubbadda cagta ee ay ugu jecel yihiin, filimkii ugu dambeeyay ee ay ku arkeen shineemada, carruurtooda ama ehelladooda, ama si fudud hiwaayadooda. Dukaanka App waxaan ka heli karnaa tiro badan oo codsiyo ah noo oggolow in aan astayno iPhone-ka in sidan. Qodobkan waxaan ku tusaynaa kuwa na siiya natiijooyinka ugu wanaagsan.
1 Barnaamijyada gidaarka ee loogu talagalay iPhone
1.1 Wareegtada 'Retina Wall' - HD Wallpapers & Astaamaha
1.2 WLPPR - Sawirada sare ee guryaha iyo shaashada qufulka
1.3 Vellum - Waraaqaha Farshaxanka iyo Taariikhda
1.4 Everpix - Taariikhda & Sawirada & Sawirada
2 Barnaamijyada darbiga tooska ah ee loogu talagalay iPhone
2.1 Waraaqo Live ah oo Bilaash ah
2.2 Waraaqo Live ii ah
2.3 Waraaqaha Tooska ah ee loogu talagalay iPhone 6s
2.4 Waraaqaha Tooska ah ee loogu talagalay iPhone 6s, 6s oo lagu daray & iLive Pro
Barnaamijyada gidaarka ee loogu talagalay iPhone
Wareegtada 'Retina Wall' - HD Wallpapers & Astaamaha
Xayeysiintu mar kale waa shar shar ah haddii aan rabno inaan ku raaxeysano codsigan bilaash, in kastoo waxaan ku baabi'in karnaa 3,29 euro. Qeybaha kala duwan ee Retina Wall na siiso, waxaan kaheleynaa: dhirta, aan la taaban karin - 3D, magaalada - nolosha, qaabab - fudud (oo ay ku jiraan waraaqaha ugu yar), cuntada - cabitaanka, xayawaanka, dadka caanka ah iyo xiddigaha, gawaarida - diyaaradaha, kartoonada, booska, cayaaraha fiidiyowga, isboortiga, muusikada, moodada, filimada, tikniyoolajiyadda, fasaxyada ...
Waxay u baahan tahay macruufka 8.0 ama ka dib waana mid ku habboon iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Qolka Retina wuxuu leeyahay celcelis ahaan qiimeynta 3 xiddig 5tii suurtogal ah.
Liiska Waraaqda: Live 4K Retinafree
WLPPR - Sawirada sare ee guryaha iyo shaashada qufulka
WLPPR waxay na siisaa 10 aruurin oo aan ka heli karno ka dib markaan wax ku iibsano app, 1,09 euro ururin kasta oo ah 4,49 euro dhamaantiis, noogu deeqa wadar ahaan 160 sawir-gacmeed. Codsigan wuxuu na siinayaa sawirro dayax gacmeed meelo badan oo adduunka ah ka mid ah, oo toddobaad kasta ku darya waxyaabo cusub bogaggeeda, si aynaan marna uga daalin adeegsiga isla waraaqahaas.
Waxay u baahan tahay macruufka 8.0 ama ka dib waana mid ku habboon iPhone, iPad iyo iPod taabashada. WLPPR waxay leedahay qiimeyn celcelis ahaan ah 4,5 xiddigood 5-ta macquul ah.
WLPPR - sawirada horefree
Vellum - Waraaqaha Farshaxanka iyo Taariikhda
Vellum waxay na siisaa ilaa 18 qaybood oo kala duwan kuwaas oo aan ka heli karno tiro badan oo sawir-gacmeedyo ah si loo habeeyo gidaarka labada shaashadda qufulka iyo shaashadda guriga. Vellum waxay na siisaa interface interface minimalist taas kaliya ay saameysay xayeysiiska kaas oo lagu soo bandhigay (waxaa loo heli karaa si bilaash ah), xayeysiisyo aanan iska ilaalin karin adoo sameynaya iibsasho-app ah.
Waxay u baahan tahay macruufka 9.0 ama ka dib waana mid ku habboon iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Vellum wuxuu leeyahay qiimeyn celcelis ahaan shan xiddig shantiiba.
Everpix - Taariikhda & Sawirada & Sawirada
Sida dhammaan codsiyada aan kugu muujiyo maqaalkan, dhammaan sawirrada Everpix waxay ku jiraan xallinta Full HD, iyagoo la jaan qaadaya shaashadda iPhone, iPad iyo xitaa Apple Watch. Everpix waxay na siisaa 13 qaybood: Abstract, Nature, Space, Fashion, Animals, Cities, Minimalism, kartoon, Cunto, Baabuur, Ciyaaraha, Muusikada, Ciidaha. Haddii aad leedahay Apple Watch oo aad badiyaa beddesho sawirka filimkaaga oo lagu muujiyo asalka, Everpix waa dalabkaaga, Barnaamij bilaash ah oo leh xayeysiis ama $ 0,99 oo aan lahayn xayeysiis.
Waxay u baahan tahay macruufka 8.0 ama ka dib waana mid la jaan qaadi karta iPhone-ka, Apple Watch, iPad iyo iPod taabashada. Everpix waxay leedahay celcelis qiimeyn ah 4,5 xiddigood 5-ta macquul ah.
Everpix Waraaqaha 4Kfree
Everpix Pro - Taariikhda, Sawirada9,99
Barnaamijyada darbiga tooska ah ee loogu talagalay iPhone
Waraaqaha tooska ah kaliya la jaan qaadi karaan qalabka leh 3D Touch technology, sidaa darteed waxaan kaliya ugu isticmaali karnaa iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus. Haddii aad ku soo dejiso barnaamijyadan aalado aan ku habboonayn tiknoolajiyaddan, waxaad awoodi doontaa oo keliya inaad ku raaxeysato sawirro muuqaal ah, adigoo ka qaadaya dhammaan nimcada teknolojiyaddan iyo si cad sawirrada.
Maskaxda ku hay in taariikhdan animated ee loogu talagalay isticmaalka shaashadda qufulka ee iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 ama qalabka iPhone 7 Plus ay shaqeyn doonaan oo keliya marka aad gujiso shaashadda qufulka, ilaa inta aynaan hayn Awoodda Awoodda Hoose ee firfircoon, hab lagu joojiyo inta badan aragtida muuqaalka iyo inta badan hababka tooska ah sida cusbooneysiinta iyo sidoo kale Hey Siri, emaylka tooska ah ee baaritaanka ...
Waxaan sidoo kale dooran karnaa sameysano abuurkeena kamaraddii iPhone-ka, illaa iyo inta ay la jaanqaadayso shaqada tooska ah, oo u isticmaal sidii gidaarka muraayadda qalabkeenna.
Waraaqo Live ah oo Bilaash ah
Warqadaha waraaqaha xayeysiinta ah ee bilaashka ah waxay na siinayaan tiro badan oo ka mid ah sawir-gacmeedka dhaqdhaqaaqa ama asalka nolosha. Ahaanshaha codsi aan bixinayn wax-soo-iibsi gudaha-ka ah si looga saaro xayeysiinta, waa inaan ka fogaanaa xayeysiinta oo si lama filaan ah ugu muuqata shaashad buuxda oo muuqaal ah. Xayeysiinta ayaa runtii ka sareysa barnaamijkan, laakiin hadaanan rabin inaan lacag ku qarashgareyno noocyadan codsiyada ah si aan u habeynno shaashadda qufulka qalabkeenna, kani waa dalabkaagii, maaddaama lacagaha ay na siiso ay yihiin kuwo aad u qurux badan, in kastoo aan loo kala saarin qaybaha.
Waraaqaha Tooska ah ee Bilaashka ah waxay u baahan yihiin macruufka 9.1 ama ka dib waxayna la jaan qaadi karaan iPhone, iPad, iyo iPod taabashada. Ma laha wax ku iibsasho-app ah.
Waraaqaha Tooska ah Xfree
Waraaqo Live ii ah
Thanks to codsigan waxaan ku nooleyn karnaa shaashadeena muuqaallo cajiib ah oo sawirada xayawaanka, qaababka aan la taaban karin, magaalooyinka, kalluunka iyo xitaa qaraxan. Live Wallpapers aniga ahaan waxay u baahan tahay macruufka 9.1 ama ka dib, waxay ku habboon tahay iPhone, iPad iyo iPod taabashada iyo Waxay leedahay qiimeyn celcelis ahaan 4 xiddigood 5-ta macquul ah.
Waraaqaha Tooska ahfree
Waraaqaha Tooska ah ee loogu talagalay iPhone 6s
Codsigan wuxuu na siiyaa in ka badan 100 asal dhaqaaqo, dhammaantoodna waxay qabtaan sawirro maalinle ah oo dhab ah. In kasta oo magacu aanu ahayn mid male-awaal ah, natiijooyinka ay innagu siiso bilaashku aad ayey u fiican yihiin, ahaanshaha barnaamij loo baahan yahay gaar ahaan hadaanan rabin inaan lacag ku qarashgareyno noocyada barnaamijyadan. Midka kaliya, laakiin waa boodhadhka la yidhi ayaa naga codsanaya inaan la wadaagno arjiga iyada oo loo marayo akoonkeena Facebook.
Waraaqaha Tooska ah ee loogu talagalay iPhone 6s - Mawduucyada Animated-ka Bilaashka ah iyo Aasaaska Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqafree
Waraaqaha Tooska ah ee loogu talagalay iPhone 6s, 6s oo lagu daray & iLive Pro
Waraaqaha Tooska ah ee loogu talagalay iPhone 6s, mar hore ayey cusbooneysiin kareen cinwaanka, waxay na siinayaan boqolaal sawirro Live ah oo loo qaybiyay tiro aad u tiro badan sida xayawaanno, xaflado, rashka, ubaxyo, meel bannaan, dib u dhac ... iPhone 6s Waxaad na tusaysaa xayeysiisyo si isdaba joog ah. Waa loo heli karaa soo degsasho bilaash ah, laakiin haddii aan dooneyno inaan ka saarno oo aan furno qaybo badan, waan awoodnaa isticmaal iibsashada gudaha-app-ka ee leh qiime dhan 3,29 euro.
Waraaqaha Tooska ah ee loogu talagalay iPhone 6s, waxay u baahan yihiin macruufka 9.1 ama ka dib waxayna la jaan qaadi karaan iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » 8-da barnaamij ee ugu fiican ee loogu talagalay iPhone-ka
Raac sida ugufiican ee Giro d'Italia adigoo adeegsanaya codsiga rasmiga ah
Amazon Prime Video wuxuu imanayaa Apple TV dabayaaqada sanadkaan